I-China OEM yesiqhelo ILogo Dual Driver Wired Gaming headset earphone EP-1245 With Microphone for mobile phone Xbox, PS4 Manufacture and Factory | Yong Fang
I-OEM yesiqhelo i-Dual Driver ye-Wired Gaming iseti yentloko ye-earphone EP-1245 NgeMakrofoni yefowuni ephathekayo ye-Xbox, i-PS4
Ukucaciswa kabini komqhubi:
Ububanzi beyunithi yomqhubi: 6MM
Ubuntununtunu: 98dB +/- 3dB
Ukuphendula rhoqo: 20Hz ~ 20KHz
Ubukhulu. Igalelo lamandla: 30mW
Cable ubude: TPE cable, 1.2M
Iplagi evakalayo: i-3.5mm igolide-plated, imilo ye-L
Ukucaciswa kweBoom Mic:
Mic ubukhulu: Ø4.0MM
Ubuntununtunu: -38dB +/- 3dB
Uhlobo lweplagi: i-3.5mm egolide
Emgceni Mic Mic:
Ubuntununtunu: -42dB +/- 3dB
Design Uyilo lwe-Dual Neodymium 6mm yoMqhubi】Kwicala ngalinye lendawo yendlebe, ngaphakathi kwindlu ye-acoustic, kukho ii-2 ii-bass ezinamandla ze-6mm neodymium driver. Ukubona ngokuchanekileyo abaqhubi ngaphakathi kunye nokuziva amandla esandi, umphambili wendlu yeefowuni ubonakala. Bangakwazi ukuvelisa ii-bass ezinzulu kunye nesandi sokucaca okuphezulu kunxibelelwano olumangalisayo kunye namava emidlalo;
【NgeMicrophone yeBoom eSusekayo yeFlexible omUkunxibelelana ngokulula kwi-Intanethi kwaye uhlengahlengise kakuhle icala kunye ne-engile yemakrofoni, Iza kunye ne-boom mic efumanekayo kwaye eguqukayo. Ke, ngale headset yokudlala, sinokuqinisekisa ukuba icrystal icacile;
Umsebenzi oMninzi kwiLayini yokuLawula kude】Imakrofoni esemgceni eyilelwe ukulawulwa kwevolumu, imakrofoni yokulawula isimumu, ukhetho lomculo, ukudlala umculo, ukuphendula umnxeba, kunye nokwala umnxeba. Le ndawo ikude inokusebenzisana kunye nemakrofoni ye-boom kunye nemakrofoni emgceni ngaphakathi kolawulo olukude;
System Inkqubo yokuSebenza eyiSmart yeDiskrikhi ngaphakathi ngaphakathi】Ngenkqubo yokusebenza kwemakrofoni eyenzelwe ngaphakathi ngaphakathi kulawulo olukude, imakrofoni ye-boom kunye nakwimakrofoni esemgceni inokusebenza ngobuchule kunye kwaye yonke imisebenzi inokulawulwa kakuhle sisilawuli esikude. Ukuba sifaka imakrofoni ye-boom, imakrofoni esemgceni iya kuyeka ukusebenza, kwaye sineentetho nge-micom ye-boom; ukuba siyayikhupha imakrofoni ye-boom, imakrofoni emgceni iya kuqala ukusebenza ngokuzenzekelayo, kwaye sineentetho ngemakrofoni emgceni ngaphakathi kolawulo olukude. Kwaye, nokuba sisebenzisa imakrofoni ye-boom okanye imakrofoni emgceni, unxibelelwano lunokulawulwa kakuhle ngolawulo olukude;
Jack I-3.5mm yomsindo wejack iyahambelana nezixhobo ezininzi】 Yenzelwe i-jack ye-3.5mm yeaudio, isebenza uninzi lweefowuni eziphathwayo, iipads, iilaptops, iPC kunye nabadlali beaudiyo. Njengendlebe yokudlala yokuyila, yenzelwe ngokufanelekileyo izixhobo zemidlalo, iMidlalo yeSelfowuni, iNintendo Shintsha, iXbox One, iXbox Series X | S, iPlayStation 5, iPS4 Pro kunye nePS4 PS5;
Ories Izixhobo zamava angcono kunye nokuhambelana okukhulu】Ngokwesiqhelo, i-earphone iza nezi zincedisi, iingcebiso zesilicone kubukhulu obahlukeneyo obahlukeneyo, S, M, kunye noL. Ke, sinokukhetha iingcebiso ezichanekileyo zeendlebe zokuba sempilweni. Kwaye, ukuze isetyenziswe ngokulula, ihlala iza nesikhokelo esikhawulezayo. Ngendlela, ukuba ufuna ezinye izinto ezinje nge-usb c iadaptha, isixhobo sePC kunye nokunye. Siyavuya ukubonelela ngezi nkonzo zilungiselelwe wena.
Egqithileyo Chukumisa uLawulo loMqhubi oThathu oMdaka weLatency yeNdlela yokuGembula exhasa i-Earbuds yeNdlebe engenazingcingo
Okulandelayo: Ixabiso elikhuphisanayo Umbala uMxube we-Bluetooth Music yoLungiso lweBT-8026
Iseti yentloko yokudlala yeBluetooth
Iimidlalo zeNtloko zeMidlalo kunye neMic
Imidlalo yokudlala Iseti yentloko engenazingcingo
Ukudlala iseti yentloko ngeMic